PressReader - Ilanga: 2018-07-05 - INSIKA:
Ilanga - 2018-07-05 - Izindaba - *Makhosi Ndleleni uMaZulu wakwaZondo Insika yaMathiyane (isigodlo) UThishanhloko waseMatatane Secondary School mthiyanesgs@yahoo.com Ungamthinta ku: 082 752 7342
ININGI labelaphi bendabuko lisenendawo futhi lisathembekile kubantu njengoba kwakwenzeka emandulo. Lokhu kungenxa yeziphiwo ezahlukene eliphiwe zona.
Kudala wawuthola ukuthi kuyaziwa ukuthi ubaba usibanibani akashayi eceleni ngomhlahlo noma kuthiwe kunomama othile ongadlali, olishayayo ilumbo noma ongashayi eceleni uma ekuhlolela.
Omunye wayaziwa ngokukhipha idliso noma elaluphi uhlobo. Njengodokotela abelapha ngokwasentshonalanga; abelaphi bendabuko behlukene, kukhona abahlolayo besebayelapha, kukhona abezwa ngawe ukuthi unayiphi inkinga besebekwelapha, bengakuhlolelanga.
Kubona laba abelaphayo, kunabelapha kakhulu uhlobo oluthize lokugula noma abaxazulula inkinga ekhethekile abangenzi konke osuke unenkinga yakho.
Inkinga ekhona manje wukuthi sekunendlala nomhobholo, umuntu uthi ezazi ukuthi yena uyinyanga kuthi uma kufika umuntu odinga usizo lwesangoma, angalanduli noma angamcaciseli ukuthi cha yena welapha kanjani kodwa amane enze sengathi uyakwazi lokhu kobungoma.
Uye azame-ke ukuhlola kuthi noma engaboni lutho kodwa enze sengathi kukhona akubonayo. Uma ngithi lokhu kudalwa wumhobholo, ngisho ngoba lo melaphi akabe esamdlulisela lo muntu oxakekile komunye umelaphi aziyo ukuthi angakwazi ukumsiza.
Usuke ekwenza lokhu ngoba efuna imali noma ngoba enqena ukuthi kuzothiwa yena akakwazi ukwelapha.
Kwesinye isikhathi kuba yisizathu sendlala esidala ukuba umelaphi agcine ebuka ukuthi uma emjikisa lo muntu, uzongatholi lutho agcine, esenza sengathi kukhona azokwenza.
Iqiniso lithi izidingo zokwelashwa kwabantu kazifani, abanye basuke bedinga ukwelashwa ngempande kanti abanye badinga ukucaciselwa ngezinto okumele bazenzele zona ngokwabo - kungazange kuthintwe mpande - ukuze kulunge lokho okusuke konakele.
Abanye basuke bedinga isaluleko nokucetshiswa ukuthi yini ezobasiza ukuze baphume enkingeni abasuke bebhekene nayo.
Kakubona bonke abantu okufanele baphume kumelaphi bephethe izijumbana zempande, abanye kusuke kudingeka iseluleko nje sento abazothi uma befika emakhaya bayilungise ngokwabo.
Kwesinye isikhathi abelaphi bagcina bengasathembekile kubantu ngenxa yokuthi basuke baphuthu- me ukuthi into ethize bayakwazi ukuyenza kanti qhabo kabakafiki ezingeni lokwelapha lolo hlobo lwenkinga noma lokugula.
Abelaphi phela nabo babanezigaba abadlula kuzona ngaphambi kokuba baphathiswe imisebenzi ethile, lokhu iningi labantu kalikwazi futhi kalikuqondi ngoba ngokwejwayelekile umuntu uthi angaphothula ephehlweni besekuba sengathi usekwazi konke.
Enye inkinga ekhona ngeyokuphuthuma ukuthi usuyelapha kanti kawukakaphathiswa ngendlela besekufika abantu befuna usizo, umelaphi abadukise kunokuba abasize.
Kubukeka sengathi lolu hlobo lwabelaphi oluzimisele ngokulalela abadala nokulinda isikhathi esifanele sokuphathiswa luyingcosana ngoba iningi liyaphuthuma besekuyonakala.
Lo mhobholo ubalimazile abelaphi abaningi, wagcina usubenze imiphuphe kanti ukube umuntu uyalinda abuze nasesigodlweni emsamo ukuthi kulindelekeni kuyena, ngabe akunankinga.
Abantu bakithi baya kubelaphi bexakekile, benethemba lokusizakala, kodwa bafike banikwe amathemba angekho.
Kuye kuthi uma kungasenzeki lokhu abakuthenjisiwe, bese lo muntu oxakekile eqalekisa wonke umsebenzi walo melaphi odlale ngaye. Okunye okubulala abelaphi wukuthi kababachazeli kahle abantu ukuthi ukugula lokhu noma inkinga lena ababhekene nayo izolapheka kancane kancane futhi kuzoya nangokuthi umsuka wayo uyini ngoba kumele kulashwe umsuka hhayi izimpawu ukuze kulunge kahle.
Manje kusuke kugijinyelwe izimpawu kube kungenziwe lutho ngomsuka oyigqikithi yenkinga. Lokhu kudala ukuba inkinga ingapheli ngoba kayilashiwe kodwa kumane kwakhiwa phezulu nje.
Sengathi abelaphi bendabuko balesi sikhathi bebengake bazihlolisise ukuthi indlela abelapha ngayo ingeyesikhashana yini noma izosiza lowo oxakekile nesizukulwane sakhe.
Yingakho uthola ukuthi umuntu useneminyaka ehamba abelaphi abehlukene, elapha into eyodwa kodwa engasizakali ngoba kufike kususwe izimpawu zenkinga kodwa uqobo lwayo kungenziwe lutho ngalo.
Kuzothi emuva kwesikhashana zibuye zivele futhi izimpawu ngoba inkinga isalokhu ikhona futhi iya ngokukhula ngoba yona kayithintwa.
Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi abelaphi bahlangane bazane besebeyalukekana, bacebisane ngezindlela zokwelapha eziyizo neziqotho, bayeke ukuncintisana okungenasidingo nomona ongabayisi ndawo. Lokhu kuzobasiza ukuba bakwazi ukusiza abantu abaxakekile ngendlela ehlelekile nesezingeni elihloniphekile hhayi kube sengathi bagaqele imali kabanamsebenzi nokusizakala kwabaxakekile.
Umelaphi nomelaphi makabe neqiniso ukuthi yini le aphathiswe yona bese egxila kuyona, bese ebonisana nozakwabo ngolunye ulwazi olungasiza isigodlo sakhe.
Nalapho-ke kuyomele aqaphele ukuthi uyaxhumana kahle nabanikazi bomsebenzi (abadala), angabe esenza sengathi isigodlo nomsebenzi ngokwakhe.
Yena kumele akuqonde ukuthi uyithuluzi abadala abasebenza ngalo ukuze kusizakale abantu. Isithunzi nokuhlonipheka komsebenzi wabelaphi bendabuko kulele kubona ngokuthi bawuhloniphe umsebenzi wabo futhi bakuqonde ukuthi unabanikazi bawo abangabaphuca wona uma bewuphethe budlabha.